प्रभावकारी काम गर्न श्रोत र जनशक्ति पर्याप्त छैन : कर्ण बहादुर बुढाथोकी ( विनी जिशिका काठमाण्डौ) – Education Rays
Home / Interview / प्रभावकारी काम गर्न श्रोत र जनशक्ति पर्याप्त छैन : कर्ण बहादुर बुढाथोकी ( विनी जिशिका काठमाण्डौ)
August 6, 2015	Interview Leaveacomment
कर्ण बहादुर बुढाथोकी
( बिध्यालय निरीक्षक , जिशिका काठमाण्डौ)
( www .educationrays.com का लागी जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाण्डौका बिध्यालय निरीक्षक कर्ण बहादुर बुढाथोकी संग पुन्यराज पुडासैनी ले लिनुभएको अन्तर्वार्ता )
एजुकेसन रेज ः यहाँको शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेशका बारेमा बताइदिनुहोस् न ।
कर्णबहादुर थापा ः धन्यवाद । मैले शिक्षा क्षेत्रमा जागिरेको रुपमा २०५० सालमा प्रवेश गरेको हुँ । जागिरको दौरानमा सर्वप्रथम जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाट जागिरे जीवनको सुरुवात भयो । त्यसपछि मेरो आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहीमा पनि काम गरें । त्यसपछि क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, सिनामंगल, काठमाडौंमा काम गरें । त्यसपछि क्रमशः दूर शिक्षा केन्द्र, शिक्षा किताबखाना, ताहाचल, शिक्षा विभाग, पुन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाही हुँदै गएको भदौबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत छु । एजुकेसन रेज ः शिक्षाकै क्षेत्र भएता पनि विविध ठाउँ र परिस्थितिमा काम गर्दाका अनुभवहरु कस्ता रहे ?
कर्णबहादुर थापा ः पहिलो कुरा त शिक्षा क्षेत्रमा स्थान र परिवेश अनुसारका समस्या छन् । जस्तै तराईको क्षेत्रमा अलि फरक समस्या छन् भने काठमाडौ उपत्यकामा फरक समस्या छन् । तराईमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो । त्यहाँ मैले नियमसंगत रुपमा काम गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरे । अन्य जहाँ पनि मैले काम गरें, नियमसंगत रुपमा गरें ।
एजुकेसन रेज ः तपाईं शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी हुनुहुन्छ । धेरैजसो शिक्षा सम्बन्धित कार्यालयहरु अव्यवस्थित छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । विद्यालय निरीक्षकको आँखाबाट हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
कर्णबहादुर थापा ः हैन सबै त त्यस्तो छैन । मैले अघि पनि भनेँ । ठाउँ र परिवेश अनुसार नेपालका धेरै जसो ठाउँमा त्यस्तो अवस्था पनि देखिन्छ । कर्मचारीको अभाव, कर्मचारीहरु तराई वा दुर्गम भेगमा जान नचाहनु, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले सहज रुपमा काम गर्न अप्ठेरो छ, अभिलेखीकरणमा असहजता छ । तर सबै ठाउँमा त्यसतो छैन । जस्तै काठमाडौंमा हेर्ने हो भने यहाँ सबै कुराहरु अद्यावधिक छन्, व्यवस्थित छन्, यहाँ धेरै काम नियमसंगत रुपमा अगाडी बढाउन सजिलो छ ।
एजुकेसन रेज ःएउटा फरक प्रश्न । यति धेरै समय काम गरिसकेपछि वि.नि. हुन सजिलो छ कि अन्य काम गर्न ? तपाईंलाइ कस्तो लाग्छ ?
कर्णबहादुर थापा ः मैले अहिलेसम्मको जागिरे अवधिमा शाखा अधिकृतको रुपमा टेबुल वर्क नै बढी गरें । काठमाडौं जिल्लामा आएपछि मात्र विद्यालय निरीक्षक भएको हुँ । मेरो दुइवटा स्रोत केन्द्र कार्यक्षेत्र छ । महेन्द्र बौद्ध स्रोत केन्द्र र भगवती बहाल स्रोत केन्द्र । यी दुईवटा कार्यक्षेत्रको अनुभवलाई हेर्दा, यहाँ विद्यालयहरु धेरै, कर्मचारीको अभाव, प्रमुख देखेको छु । एक जनाले करिब सयवटा विद्यालय हेर्नुपर्दा स्वभावत कार्यशैली सुस्त देखिन्छ नै ।
एजुकेसन रेज ः विद्यालय निरीक्षकको रुपमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तपाईंको हो । त्यस पक्षमा देखिने समस्याहरु के के हुन् ?
कर्णबहादुर थापा ः सामुदायिक विद्यालयहरुका हकमा धेरैजसो समस्या विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा देखिन्छ । अहिले राजनैतिक अवस्थामा, राजनैतिक दलहरुबीचमा सहमति हुन नसक्ने, हुँदा प्रधानाध्यापकले सबै भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाले सरकारी नियमकानुन पूर्ण रुपमा लागू गराउन समस्या देखिन्छ ।
एजुकेसन रेज ः कतिपय विद्यालयहरुमा वि.व्य.स. मा गैर अभिभावक निर्वाचित हुने, वि.नि., स्रोत व्यक्तिलाई राजनैतिक दलले नटेर्ने समस्या छ भनिन्छ नि ?
कर्णबहादुर थापा ः त्यस्तो चाहिँ मैले हुन दिएको छैन । यसमा मैले सामुदायिक वि.व्य.स. कार्यविधि २०७१ लाई टेकेर मात्र वि.व्य.स. गठन हुन्छ । जस अनुसार निज सम्बन्धित विद्यालयको अभिभावक हुनैपर्दछ, अभिभावकमा पनि वंशजको नाता (आमा,बुबा,हजुरबुबा, हजुरआमा) हुनुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ ।
एजुकेसन रेज ः भनेपछि सर आएपछि त्यस्ता गतिविधि भएका छैनन् ?
कर्णबहादुर थापा ः मैले त्यस्तो काम गरेको पनि छैन र गर्न दिने पनि छैन । म सरकारी कर्मचारी भएको कारणले शिक्षा ऐन, नियम र कार्यविधिलाई उल्लंघन गर्ने नदिनु मेरो जिम्मेवारी पनि हो । म मेरो जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध छु । मैले प्रत्येक विद्यालयमा प्र.अ. हरुलाई पनि यही निर्देशन दिएको छु ।
एजुकेसन रेज ः अब, निजी विद्यालयतिर आउँ । निरीक्षणको क्रममा निजी विद्यालयहरुमा चाँहि के समस्या देख्नुभयो त ?
कर्णबहादुर थापा ः संस्थागत, व्यक्तिगत लगानी भएकाले संस्थागत विद्यालयहरुमा चाँहि आफ्नै किसिमको व्यवस्थापन समिति देखियो । धेरै विद्यालयहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नाले समस्या भएको छ । त्यस्तै धेरै विद्यालयहरु भएकाले पनि अलि व्यवस्थित गर्न समस्या देखिन्छ । त्यसो भएता पनि संस्थागत विद्यालय नियमावली २०६९ अनुसार अनुगमन भने गर्ने गरिएको छ ।
एजुकेसन रेज ः सरले समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । सरहरुविना विद्यालयहरुको बैठक बस्न सक्दैन । एकैजनाले सयभन्दा बढी विद्यालयको अनुगमन गर्न त समयकै समस्या बढी होला नि ?
कर्णबहादुर थापा ः मैलै अघि पनि भनेँ, कर्मचारीको अभावमा एकैजनाले सयौं विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्दा कठिनाइ त पक्कै हुन्छ । त्यसको बाबजूद पनि बिहान देखि बेलुकीसम्म गएर भएपनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छौं ।
एजुकेसन रेज ः नियमित गतिविधिबाहेक अन्य केही नयाँ योजनाहरु ल्याउनुभएको छ कि ?
कर्णबहादुर थापा ः वास्तवमा हामीले बेलाबेलामा तालिमहरुको आयोजना गर्ने गर्दछौं । पाठ्यक्रमसम्बन्धी तालिम भर्खरै पनि आयोजना गरेका थियौं । त्यसैगरी प्र.अ.हरुको भेला मासिक रुपमा बोलाएर समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको पनि आयोजना गर्ने गरेका छौं ।
एजुकेसन रेज ः भनेपछि प्र.अ. हरुको जिम्मेवारी बढी हुन्छ ?
कर्णबहादुर थापा ः निश्चित रुपमा विद्यालयको दैनिक गतिविधि र नियमित प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले प्र.अ.हरुको दायित्व र जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।
एजुकेसन रेज ः कतिपय नीजि विद्यालयहरुले सरकारको निर्देशन नमान्ने गरेको सुन्नमा पाइन्छ । हेलचेक्र्याईं गर्छन् भन्ने जनगुनासो पाइन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
कर्णबहादुर थापा ः यस्तो समस्या समाधानको लागि अहिले शिक्षा विभागले एक स्थायी अनुगमन समिति बनाएको छ । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको वि.नि., स्रोत व्यक्ति, प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि रहेको यो स्थायी अनुगमन समितिले विद्यालयहरुको अनुगमन गरी आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो प्रतिवेदन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्दछ । र त्यसकै आधारमा कामकारवाही हुनेछ । हाम्रो सम्बन्धमा हामी प्रत्येक महिना ५ वटा विद्यालयहरुको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, रायसल्लाह दिने गर्ने गर्दछौं ।
एजुकेसन रेज ः काम गर्न काठमाडौं र अन्य जिल्लामध्ये कहाँ सहज, कहाँ असहज छ ?
कर्णबहादुर थापा ः वास्तवमा यहाँ विद्यालयहरु धेरै छ । हामी अत्यन्तै व्यस्त हुन्छौं । पहाड र तराईका आफ्नै समस्या भएकाले चुनौती सबै ठाउँमा छ । चुनौतीकै बीचबाट समाधान खोज्नु पर्छ । त्यसलाई सहजतापूर्वक लिन्छु ।
एजुकेसन रेज ः तपाईंको तर्फबाट विद्यालयका सम्बन्धित पक्षहरुलाई केही सुझावहरु छन् ?
कर्णबहादुर थापा ः विद्यालयहरुले समयमै फ्ल्यास रिपोर्टहरु बुझाउने, समयमै लेखापरीक्षण गर्ने, सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने, दैनिक शिक्षण क्रियाकलापमा ध्यान दिने आदि काम समयमै गर्ने हो भने सहज हुनेथियो । सम्पूर्ण विद्यालयहरुले सरकारी नीतिनियमको पालना गर्दै कुनै समस्या आएमा चाँडोभन्दा चाँडो स्रोत केन्द्रमा आएर बसेर छलफल गरेर अगि बढ्ने हो भने समस्याहरु आफैं कम भएर जान्छन् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।